Physical Exercises – စာမကျြနှာ6– Healthy Life Journal
လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် ရောဂါကာကွယ်မှုများ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ နေ့စဉ် ဘယ်မှာမဆိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ သင့်ကို နာတာရှည်ရောဂါတွေ ကင်းဝေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ – နှလုံးရောဂါအမောဖောက်ခြင်း (Heart Attack) တစ်ပတ်မှာ ၂-၄ နာရီခန့် လမ်းမြန်မြန် လျှောက်ပေးရင် နှလုံးရောဂါထခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို ၅၄...
ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းက ဘယ်လောက် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနိုင်သလဲ . . .
– စက်ဘီးစီးခြင်း တစ်နာရီမှာ ကယ်လိုရီ ၆၅၀လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ – စက်နဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်း မိနစ် ၃၀မှာ ကယ်လိုရီ ၃၇၀လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ – ကြိုးခုန်ခြင်း တစ်နာရီမှာကယ်လိုရီ ၁၀၀၀ လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ – ထိုင်-ထလေ့ကျင့်ခြင်း ၁၅ မိနစ်မှာ ၁၀၈...
တစ်နာရီ လမ်းလျှောက်ခြင်းက အထိုင်များခြင်း၏ ဆိုးကျိုးကို ချေဖျက်ပေးနိုင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ (Ref; BBC) နေ့စဉ် ၁နာရီကြာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတာကအထိုင်များတဲ့ အလုပ်ကြောင့် စောစော အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေက အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။သုတေသီတွေက လူတစ်သန်းကျော်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြတာပါ။တီဗီကြည့်တာက တီဗီကြည့်ရင်း သရေစာစားတာနဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့် အထိုင်များတာထက်ပိုမိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုနည်းတာက...
သင် လေ့ကျင့်ခန်း ပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေသေးသည့် သင်္ကေတရှစ်ရပ်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ( Ref;RD) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ကိုယ်၊ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုသိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သင်က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်နေပေမယ့် ပိုမို ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတဲ့သင်္ကေတတွေက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အဆက်မပြတ် နုံးချည့်ညောင်းညာနေရင်...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက အသားအရေလှပတောက်ပြောင်မှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။နံနက်စောစောမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် တစ်နေ့တာလုံးစွမ်းအင်တိုးစေပါတယ်။ အပြင်ထွက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင် လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေသန့်ကို ရှူရှိုက်ဖြစ်စေပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကျန်းမာလန်းဆန်းစေပါတယ်။ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ နံနက်ခင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ညဘက်မှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ညဘက် အိပ်ပျော်တာကလည်း အသားအရေကို လန်းဆန်းအားပြည့်စေပါတယ်။ Healthy Life...
အသားအရေရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရအောင် . . .
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက သင့်ကျန်းမာရေး၊ အသားအရေ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်စတဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး အစစအရာရာ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပစေဖို့ ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အတွက် လှပရခြင်းအကြောင်းပြချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိထားပါတယ်။ (၁) ကျန်းမာတဲ့အတွက် လှပရတာပါ ကျန်းမာတဲ့ လူတွေကလှပနေကြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကို အသင့်အတင့်ပြု လုပ်တာကြောင့် နုပျိုပြီးပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသွင်အပြင်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။...
(၁) ခေါင်းအုံးသုံးပြီး ခါးနာသက်သာစေရန် ပက်လက်လှန်အိပ်တဲ့အခါ ဒူးအောက်မှာ ခေါင်းအုံးပါးတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် နှစ်လုံးထားပြီး အိပ်ပါ။ ဘေးတစ်စောင်းအိပ်တဲ့အခါ ဒူးတွေကြားထဲ ခေါင်းအုံးတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် နှလုံးထားပြီး အိပ်ပါ။ (၂) အလုပ်လုပ်ရင်း ခါးနာ သက်သာစေရန် ငါးစက္ကန့်လောက်နားပြီး ဒီလေ့ကျင့်နည်းနှစ်ခုကို သုံးကြိမ်...
လေ့လာမှုအရ လမ်းလျှောက်ရာမှာ တေးသီ ချင်းနားဆင်ရင်း လမ်းလျှောက်သူတို့က ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုလမ်းလျှောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အတွက် ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်း ကျိုးတွေကတော့- – ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေပါတယ်။ – ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ – နှလုံးကို ပိုကျန်းမာစေပါတယ်။...
အားကစားခန်းမတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါ တိုးတက်မှု ပိုရရှိစေမည့် နည်းလေးသွယ်
(၁) မနက်ခင်းမှာ အားကစားလုပ်ပါ။ မနက်ခင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ စွမ်းအင်အရှိဆုံး အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် မနက်ခင်းမှာ လေ့ကျင့်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အားကစားခန်းမကို အတူသွားဖော် ဒါမှမဟုတ် အတူကစားဖော်ရှာပါ။ (၃) ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်သန်စွမ်းကြံ့ခိုင်စေချင်တဲ့ အပိုင်းကို...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်ကို ဘယ်လိုကျန်းမာစေသလဲ. . .
လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့နာရီဝက်ခန့် ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့အထိ သင့်ဦးနှောက်ကျန်းမာစေမှာပါ။ – လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် အဓိကဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါဝေဒနာလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ – လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် ဦးနှောက်ဆီကို သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု အားကောင်းစေပြီး မှတ်ဥာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာကို တိုးမြင့်စေပါတယ်။ – လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် ဦးနှောက်ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေတဲ့ ဓာတ်တွေထွက်ပေါ်လာစေပြီး...